JA11 air jet yomluki - China Tianyi Group
JA11 190 ~ 360 umoya jet koyikisa JA11 series air jet yomluki yenzelwe yi Qingdao iflegi ebomvu textile oomatshini co., Ltd nokubambisana Qingdao eyunivesithi ngenxa yokudibanisa iingenelo lonke uhlobo textile yomluki apha ekhaya nakumazwe aphesheya kunye technology.therefore phambili, JA11 series umoya uyaqhayisa ezivele jet ozelwe imfuza umgangatho, nto leyo ebonisa umgangatho walo ezizodwa kunye nobungcali. I-lamba Izivakalisi indawo JA11 kukuba ikwenzela abaxhasi koyikisa kunye nomgangatho kunye nexabiso kakhulu. Kuxhomekeka requireme eyanelisayo ...
JA11 190 ~ 360 umoya jet yomluki
JA11 series air jet yomluki yenzelwe yi Qingdao iflegi ebomvu textile oomatshini co., Ltd ngokusebenzisana Qingdao eyunivesithi ngenxa yokudibanisa iingenelo lonke uhlobo textile yomluki apha ekhaya nakumazwe aphesheya kunye technology.therefore phambili, JA11 series umoya jet yomluki liqhayisa wazalwa zofuzo esemgangathweni, olumisela umgangatho wayo ezizodwa kunye nobungcali.
I-lamba Izivakalisi indawo JA11 kukuba ikwenzela abaxhasi koyikisa kunye nomgangatho kunye nexabiso kakhulu. Ngokuxhomekeke mfuneko neyanelisayo ixabiso eliphantsi kunye imveliso ekumgangatho ophezulu, le yomluki ungenza abaxhasi ukufumana uncedo kakhulu, nto leyo isibambiso creditable ukuba abathengi kukhuphiswano lorhwebo kakhulu
Next: JA11 eziphezulu nezisezantsi elikabini yomluki umqadi air jet yomluki